सावधान ! आज बाट यस्तो सैलिमा हुदै छ लकडाउन, अहिले सम्मको भन्दा फरक ! बाहिर भुलेर पनि ननिस्किनु होला !! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सावधान ! आज बाट यस्तो सैलिमा हुदै छ लकडाउन, अहिले सम्मको भन्दा फरक ! बाहिर भुलेर पनि ननिस्किनु होला !!
सावधान ! आज बाट यस्तो सैलिमा हुदै छ लकडाउन, अहिले सम्मको भन्दा फरक ! बाहिर भुलेर पनि ननिस्किनु होला !!
3,979 Less thanaminute
ट्राफिक प्रहरीले आजदेखि लकडाउनलाई थप कडाइ गरेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक उपत्यकालगायत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुग्ने नाका, मुख्य सडक तथा भित्री सडकको जाँचमा थप कडाइ गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिनमा १५५ स्थान र रातमा ४५ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखी सवारीसाधन जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
भित्री सडकमा भने मोटरसाइकलमा ट्राफिक प्रहरी खटाएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि नेपालमा हुने सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले यही चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी देशव्यापीरूपमा लकडाउनको आदेश जारी गरिएको थियो । लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर बाहिर ननिस्कने प्रतिबद्धतासहित बेलुका मात्रै उक्त सवारीसाधन छाड्ने गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने पाँच हजार बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिएको छ भने २५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई समेत कारवाही गरिएको छ । यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँद्वारा विभिन्न मितिमा जारी भएको सात दिने पहेँलो रङको सवारी पास अब थपिएको लकडाउन अवधिभर पनि मान्य हुने जनाएको छ । यो समयमा पास भएर पनि शान देखाउँदै घुम्न निस्कने, तीव्र गतिमा कुदाउने, एक व्यक्तिको नाममा भएको पास अर्को व्यक्तिलाई दिनेमाथि महाशाखाले विशेष निगरानी थालेकोसमेत प्रहरीले जनाएको छ ।
आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी